Iiprojekthi zeArduino -Ikaro
yokuqalisa >> Arduino
Arduino liqonga le Izixhobo zasimahla, iflegi yeHardware evulekileyo. Ndiyathanda ukucinga malunga ibhodi ye-arduino njengakwingqondo elawula zonke iiprojekthi zethu. Ngokwenene sisilawuli esincinci esivumela ukuba sinxibelelane neendidi ezininzi zeenzwa zokuqonda umhlaba kunye nokwenza izinto zethu kunye nezixhobo.
Kude kube ngoku, ukuba sifuna into efanayo kuya kufuneka sithathe iPIC, ikhadi lokuprograma kwaye sihlanganise isekethe yethu. I-Arduino, masithi iyilinganisile kwaye siyabulela kuluntu olukhulu olukhoyo kunye namaxwebhu kuye wonke umntu kunye namawaka, amashumi kunye namawaka eeprojekthi ezenziwe kwaye ziyafumaneka ukwakha, ukuphucula kunye nokufunda, iye yashiya abo badala beenkqubo, ngakumbi phakathi uninzi lwabaqalayo. I-Arduino ivumele ukungena kwimikhosi yama-elektroniki edijithali.
Siza kuthetha ngeeprojekthi ezithile apho siza kusebenzisa iArduino kuvavanyo lwethu lwasekhaya kunye nolwethu Iiprojekthi ze-DIY
Kweli nqaku ndiza kuchaza indlela yokusombulula impazamo eqhelekileyo eArduino: avrdude: ser_open (): ayinakuvula isixhobo «/ dev / ttyACM0»: Imvume… Qhubeka nokufunda
Arduino ukwenza imisebenzi emininzi kunye nolawulo lwexesha
Andililo ingcali yaseArduino, nangona ndinetafile ixesha elide khange ndiphande. Amaxesha endiwasebenzisileyo ibisisixhobo sokukopa kunye nokuncamathisela ikhowudi esele yenziwe kodwa ngaphandle komdla omkhulu ekufundeni ngenene ukuba isebenza njani, kodwa ndinenjongo yokwenza ukuba isebenze kwaye iluncedo kum. Le Krisimesi ndiyilungisile imeko yoKuzalwa kancinane nee-LEDs ezithile kunye ne-HC-SR04 ye-ultrasound sensor. Ndaye ndayeka ukujonga into ekufuneka yenziwe.
Ndifuna ukwenza izinto ezahlukeneyo ngee-LEDs ezimbini ezivela kumqondiso omnye. Yhoo. Ndikhawuleze ndakhubeka kwinto endicinga ukuba iyakuba yiyo enye yezithintelo zokuqala ohlangabezana nazo xa uqala ukungxola ngeArduino. Kwaye awudingi kuyenza ibe nzima kakhulu. Ndithetha nje ngezinye ze-LED, uyaqonda ukuba awukwazi ukwenza le nto uyifunayo ngokuchanekileyo.
Masikucacise kwasekuqaleni ukwenza imisebenzi emininzi akukho eArduino, imisebenzi emibini ayinakwenziwa ngokufana. Kodwa kukho iindlela zokwenza iifowuni ngokukhawuleza kangangokuba zibonakala zisebenza ngaxeshanye.
Ndixelela imeko ngokweenkcukacha. NgeKrisimesi ndimise uMdlalo wokuZalwa kukaYesu kwaye ndifuna ukuba izibane ezithile zoKuzalwa zize xa iintombi zam zisondela. Akukho nto inzima. Ndifuna nje amasebe amabini kwizibane ezikhokelwayo ukuba zisebenze ngokwahlukileyo kumaxabiso enzwa yokusondela.
Uyenza njani irobhothi eyenziweyo kunye neArduino
Kule nqaku siza kufunda ngendlela yokwenza ifayile ye irobhothi encinci eyenziwe ekhaya elawulwa yibhodi yeArduino. Injongo yeerobhothi iya kuba kukuthintela imiqobo ngokusebenzisa inzwa ye-ultrasound, xa ifika kumqobo iya kujonga zombini iindlela kwaye ichonge eyona ndlela yokuqhubeka nokuhamba kwayo.
Kule nxalenye yokuqala siza kugxila ekwakheni iqonga leerobhothi, ukudibanisa iinxalenye kunye nokuzidibanisa.
Ulawulo lweServomotor ngePWM kunye neArduino
Sele sibonakalisile kwibhlog Arduino (https://www.ikkaro.com/kit-inicio-arduino-super-starter-elegoo/) Kwaye enyanisweni zivela kwiiprojekthi ezininzi kubandakanya le (https://www.ikkaro.com/node/529)
Ngoku masiqhubeke phambili kancinci kwaye masenze moderate imiqondiso ngobubanzi ukubetha (PWM), oku kungasetyenziselwa umzekelo ukuphatha ii-servomotors ezinje ngale zichazwe apha (https://www.ikkaro.com/introduccion-al-aeromodelismo-electrico/) okanye i-rgb leds phakathi kwabanye. Kulabo abangaziyo ukuba yintoni i-PWM, yindlela yokumodareyitha eyenziwa kumqondiso kwaye isebenza "ukuhambisa ulwazi ngejelo lonxibelelwano okanye ukulawula ubungakanani bamandla athunyelwa kumthwalo" (Wikipedia)
Kudala ndijonga iiprojekthi ezenziwe Arduino, ke bendinomdla wokwazi ngale nto Arduino kwaye ndikhangele ulwazi oluncinci kumnatha.
I-Arduino liqonga lomthombo wehardware evulekileyo esekwe kwibhodi elula ye-I / O kunye nemeko yophuhliso ephumeza inkqubo yoLungiso / Wiring. IArduino ingasetyenziselwa ukuphuhlisa izinto ezizimeleyo ezisebenzisanayo okanye inokudityaniswa kwisoftware yekhompyuter